साढे तीन लाखमै नेपालमै बन्छ यस्तो आकर्षक घर ! पुरा पढनुहोस – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Intresting/साढे तीन लाखमै नेपालमै बन्छ यस्तो आकर्षक घर ! पुरा पढनुहोस
3,0263minutes read
‘यो घरको ग्यारेन्टी ३० वर्षको गरेका छौ । तर यो भन्दा बढी पनि टिक्छ’ जोशीले भने ‘ घर निर्माणलाई दिगो बनाउने हाम्रो प्रयास हो ।’घर बनाउँदा प्रयोग हुने बाँसको आवश्यक ट्रिटमेन्ट गरिन्छ । कम्पनीका अनुसार ट्रिटमेन्ट गरेपछि बाँसमा किरा लाग्ने समस्यानै हुँदैन । यस्तो बाँसमा धुलिया लाग्ने समस्या पनि हुँदैन । बाँस आफै इन्सुलेटेड भएकोले विग्रिने समस्या पनि कम हुन्छ ।कम्पनीले अहिलेसम्म एक हजार घर बनाइसकेको छ । कम्पनीले व्यक्तिगत, गैरसरकारी संस्था, विद्यालयलगायत लागि यस्ता घर बनाएको हो ।
सुर्खेतमा एक बाख्राले गर्यो यस्तो चमत्कार, थाहाँ पाउँने सबै हैरान